Vedio/Muuqaalo Arkiver - NorSom News
Daawo: Dareenka iyo diyaargarowga soomaalida Oslo ee dagaalka Ukraine.
Norsomnews - 1. april 2022
Daawo: Muslimiinta Norway oo ku heshiiyay inay mideeyaan xiliyadda salaadaha: Ururka IRN oo howshaas kasoo shaqeeyay.
Norsomnews - 26. mars 2022
Muhiimadda Irbadda 3.aad ee Corona: maxey tartaa? Yey tahay inay qaataan? Maxeyse qofka u qabataa?
Norsomnews - 25. mars 2022
Daawo NorSom TV & Wararkii ugu muhiimsanaa ee isbuucii tagay ka dhacay Norway iyo Yurub.
Norsomnews - 6. mars 2022
Daawo Wareysi: Soomaalida oo cunsurinimo iyo dhibaatooyin kaleba kula kulantay xuduudaha Ukraine
Norsomnews - 5. mars 2022
Dagaal Ukraine maxaa xiga: Maxaase ka dhalan kara-Wareysi Asad Adaani
Norsomnews - 3. mars 2022
Dr. Gaas: Dagaalkan wuxuu si dhaqso ah isugu badali karaa dagaalkii 3.aad ee aduunka.
Norsomnews - 28. februar 2022
Muhiimadda waxbarashada dugsiga sarre ee dhalinyaradda iyo doorka waalidka ee waxbarashada ilmaha.
Daawo: Norway oo sharci siisay 53 qof oo dalkan sharci la aan ku ahaa 16 sano iyo ka badan.
Norsomnews - 21. februar 2022
Daawo: Wasiiradda isdhexgalka oo jawaab ku saabsan jinsiyad ka celinta caruurta ka dalbatay hey’adda qoxootiga ee UDI-da.
Daawo: Isbitaaladda Norway waxaa laga helaa fursad qaliin-furitaan ah oo loo bandhigo haweenka gudan.
Norsomnews - 15. februar 2022
NorSom TV & Wararkii ugu muhiimsanaa ee isbuucii tagay ka dhacay Norway.
Norsomnews - 13. februar 2022
Daawo NorSom TV: Shirka jaraa´id ee dowladu ee shaley ku furtay dalka oo af soomaali lagu turjumay
Daawo NTV: Dowlada oo qaaday inta badan xeerarkii adkaa ee corona: ku dhawaansho xaalad caadi ah.
Norsomnews - 2. februar 2022
Maxkamadda oo go’ aan ka gaartay codsigii Breivik ee ahaa in xabsiga laga sii daayo.
Norsomnews - 1. februar 2022